Tababare Solskjær oo farta ku fiiqay dhibaatada heysata kooxda Manchester United – Gool FM
Xiddigaha ugu gambiska badan 2020 shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub oo la shaaciyey… (Adama Traore oo ka sarreeya Messi!)
Diyaaradda gaarka ah ee Lionel Messi oo lagu qasbay inay deg deg ugu degto garoonka diyaaradaha Brussels
Cristiano Ronaldo oo sanadkan sameynaya rikoor ku cusub kubadda cagta!
Kaddib isku dhacii Messi iyo Maamulka Barcelona, muxuu yahay go’aanka kabtanka Argentina uu ka qaatay mustaqbalkiisa?
Neymar Jr oo deeq lacageed oo xoog leh ku bixiyay la daallanka Coronavirus
Abramovic, Agnelli, Mansour & Milkiilayaasha Kooxaha kubadda cagta ee ugu hantida badan
Qaabka lagu dhammaystiri karo horyaalka Serie A oo la sii ogaaday & Saddex kulan oo la ciyaari doono…
Tababare Solskjær oo farta ku fiiqay dhibaatada heysata kooxda Manchester United
Dajiye September 26, 2019
(Manchester) 26 Sebt 2019. Tababaraha kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ku amaanay ciyaartoydiisa sida ay u dhaliyeen dhamaan rigoorayaasha kulankii xalay ay la ciyaareen naadig Rochdale.
Manchester United oo 90-ka daqiiqo barbaro 1-1 ah la dhaafi weysay kooxda Rochdale kulankii xalay wareega saddexaad ee tartanka Carabao Cup, ayaa waxay ugu dambeyntii ku soo baxday rigoorayaal 5-3 ah.
Tababare Solskjær ayaa farta ku fiiqay dhibaatada heysata kooxda Manchester United, wuxuuna sheegay in Red Devils ay u baahan tahay inay goolal badan dhaliso wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu qanacsanahay kalsoonida ciyaartoyda, dhamaantood waxay doonayeen inay tuuraan rigoorooyinka”.
“Daniel James wuxuu codsaday inuu tuuro rigoorada, waana waxa aad dooneyso inaad ku aragto ciyaartoydanada, kalsoonidaas”.
“Kullamo badan ee xilli ciyaareedkan waxaan ku hormarnay gool, kaddib waxaa muhiim ahaan laheyd inaan dhalino gool labaad, balse ma aanan sameynin”.
Si kastaba ha noqotee, waxaa xalay la sameeyay Isku aadka wareega afaraad ee tartanka Carabao Cup-ka, kaddib marka ay soo idlaadeen kulamadii wareega saddexaad ee tartankan, Manchester United ayaana wajihi doonta kooxda Chelsea, iyadoo ay ciyaartan dhici doonto dhamaadka bisha soo socota.
“Waxaan diiday inaan u dhaqaaqo kooxaha Manchester City iyo Paris Saint-Germain” – De Jong
Madaxweynaha La Liga oo ka qoomameynaya in Neymar Jr uusan wali ku soo laabanin horyaalka Spain